Barre des Ecrins DOWNLOAD - Photoreal ပေါင်းကွက် FSX & P3D - Rikoooo
Barre des Ecrins - Photoreal ပေါင်းကွက် FSX & P3D
အတူလိုက်ဖက်တဲ့ FSX-SP2 + FSX-SE + P3D v1 ။ * v2 v3 စမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့
အရွယ် 300 ကို MB
downloads ရယူရန္ 25 583
Author: ဖရန့် Dainese နှင့် Rikoooo
ဗားရှင်း update လုပ် auto-installer ကို 10
ဤကိစ္စတွင်အတွက်ကွက် LOD11 (မြင့်) ကိုအဲလ်ပ်တောင်တန်း၏အရှေ့တောင် Rikoooo ဖွငျ့ခဲ့ထက်ဝက်ရာအလွန်လှပသောရှုခင်း, ။
အဆိုပါရှုခင်းကို HD ကို Barre des Ecrins နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ပါဝင်ပါသည်။
အဆိုပါ Barre des Ecrins ကွာ Durance နှင့်Vénéonရာရေအကြားသွေးခွဲ line ကနေတည်ရှိပြီး Provence-Alpes-Cote d'Azur အတွက်အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုင်းထိပ်ရီ (4088 မီတာ) မှထိပ်သီးအစည်းအဝေးခေါင်အပေါ်အနောက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ပြေး။ မြောက်မျက်နှာကမျက်နှာရေခဲ (အ Glacier ဖြူ၏အချက်စတင်ပြီး) နေတောင်ဘက်ခြမ်း, ကျောက်ဖြစ်ပါတယ်။
သူမသည် Pelvoux Vallouise အတွက်အသုံးများသောအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအစအဘိဓါန် Occitan နှင့်တောင်ပိုင်းအဲလ်ပ်တောင်တန်းရှိအမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်ဖြစ်ပါတယ်
> Add-ons တွေကို Rikoooo - -> Barre des Ecrins - additional information ကိုသင်၏ "menu ကို Start တွင်တွေ့နိုင်ပါသည် Photoreal ပေါင်းကွက် FSX & P3D"
သတိပြုရန်ကြီးမားတဲ့ဖိုင် 298 ကို MBကဥပမာ (အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်ရှိသည်ဖို့ခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုဖမ်းဆီး၏အချက်မှာပြန်လည်စတင်မယ့် download, accelerator software ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည် FlashGet).
အရေးကြီးဘယ်လိုရှုခင်းကိုအသုံးပွုဖို့? လေယာဉ် Start, ထို့နောက်ဂိမ်းအတွင်းဖွင့်လှစ် မြေပုံ နှင့်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တွေကိုတိုက်ရိုက်သင်တို့၏လေယာဉ်ရွှေ့ဖို့အောက်က GPS စနစ် adress တဦးရိုက်ထည့်ပါ:
Barre des Écrins - Photoreal
44 55 ° N23
6 21 ° E36
သင်တို့သည်လည်းနှစ်ခု Grenoble လေဆိပ်ထဲကတစ်ခုကနေသို့မဟုတ် Saint Crepin (LFNC) မှသင်တို့ပြေးယူထို့နောက် Barre des Ecrins တိုက်ရိုက်ယင်ကောင်နိုင်ပါတယ်။
ဤတွင်ကွက် LOD11 Rikoooo ကပံ့ပိုးထားတဲ့ဧရိယာသည်:
OFX လစ္စဘွန်းမြို့ Landmark 2014 FSX & P3D
အဆိုပါ Guadeloupe အခမဲ့အဘို့ P3Dv4
Las Vegas မှ - Mega Photoreal ရှုခင်း FSX & P3D
လ NMP ၏ Crater FSX & P3D